FALANQEYN:- Labo arrimood oo sabab u ah hoos u dhaca ku yimid lacagta doollarka ee suuqyadda dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
FALANQEYN:- Labo arrimood oo sabab u ah hoos u dhaca ku yimid lacagta doollarka ee suuqyadda dalka
Waxaa saacadihii ugu dambeysay suuqyadda magaalada Muqdisho laga dareemayay hoos u dhac aad u baahsan oo ku imaanayay qiimaha lagu kala sarifto doollarka Mareykanka iyo shillinka Soomaaliga, kadib doorashadii uu ku guuleystay madaxweyne Farmaajo.
Halka doollar Mareykanka ah ayaa maanta suuqyada lagu kala sarifanayaa 16,000 shilling Soomaali, halka markii hore lagu kala sarifan jiray lacag dhan 23,000 (seddax iyo labaatan kun oo shilling soomaali).
Hoos u dhacaan ku yiimid doollarka iyo sare u kaca shillinka Soomaaliga ah ayaa dhaliyay xaalad hubanti la’aan ah oo ku yimid ganacsiga, waxaana dadka dhaqaalaha ku xeel-dheer ay sheegayaan in xaaladaan ay tahay mid deg-deg ah oo ay sabab u noqon karaan labo arrimood oo kala ah:-
1- Lacagihii doollarka ee ololaha doorashada musharixiinta oo suuqa soo galay.
2- Rajo laga qabo inay suuqa soo galaan lacago doollar ah oo mushaar ahaan loo siin doonno ciidanka.
Waxay labadaan arrimood ka mid yihiin sababaha ugu weyn ee keenay in lacagaha dalka ay qiimo yeeshaan oo lacagaha qalaadna ay hoos u dhacaan, sidaas oo ay tahay shillinka Sooomaaliga waa mid aysan dowlad gacan ku hayn oo u gacan galay ganacsato, laguna daabaco meelo kala duwan.
Ugu dambeyntii, waxyaabaha kale ee keeni kara hoos u dhaca doollarka ee suuqyada dalka ayaa noqon kara in ganacsatada dalka ay leeyihiin uljeedooyinka ah inay ku aruursadaan doollar badan, kadibna shillinka Soomaaliga ah ay halkiisii ku celiyaan.
Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha dowladda, shaqaalaha shirkadaha kala duwan iyo guud ahaan dadka shaqeeya ayaa mushaarka ay qaataan ku saleysan yahay doollarka Mareykanka, waxaa kaloo doollarka uu noqday lacagta rasmiga ah ee laga isticmaalo dalka, taas oo la isugu diro mobeylada gacanta laga isticmaalo.